MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi [Farmaajo] ayaa marti-qaadi u u fidiyay Axmed Burhan Maxamed, oo ah Soomaali-Mareykan ku guuleysta tartanka Qur'aan akhriska Ramadan-kii ka dhacay dalka Imaaraadka.
Axmed Burhan, oo 17 jir ah ayaa lagu wadaa in isago iyo aabihii ay Muqdisho yimaado todobaadka soo aadan, si uu ula kulmo Madaxweyne Farmaajo, oo doonaya inuu hambalyo ku aadan guushiisa tartanka dhankiisa u gudoonsiiyo.
Axmed oo Soomaali-American ah ayaa u tartamay dalka Mareykanka, isagoo kusoo baxay tartanka caalamiga ah, oo ay kasoo qeybgaleen in ka badan 100 dal, wuxuuna abaalmarin ahaan u helay 68,000 kun oo Dollar-ka Mareykanka.
Axmed Burhan, oo deegaan ahaan Mareykanka uga nool gobolka Minnesota, ayaa guushiisa noqotay mid si aad ah loogu wada farxay, maadaama uu yahay wiil asal ahaan Soomaali ah.
Gobolka Minnesota, ayaa ah halka ugu badan ee ay Soomaalida ku nool yihiin, kuwaasoo qaab qaxooti ahaan ku galay dalkaasi, kadib markii ay burburtay dowladii dhexe ee Soomaaliya 1991-dii, oo dalkuna dagaal sokeeye ka billowday.